Ọ bụ Gọọmentị St. Kitts & Nevis bụ ụlọ ọrụ omekome ugbu a?
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ Saint Kitts na Nevis » Ọ bụ Gọọmentị St. Kitts & Nevis bụ ụlọ ọrụ omekome ugbu a?
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ kacha ọhụrụ na Lebanon • News • ndị mmadụ • Akụkọ Saint Kitts na Nevis • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • WTN
Ị kwesịrị ịzụta paspọtụ mba ọzọ? Kitts na Nevis adịla njikere ịre paspọtụ ya ka ọ dị oke ilu- ka ọ ga-adị, ọ ga-aka mma- na ọ bụ ihe niile gbasara iwu na nke gọọmentị.
Kedu maka ịbụ nwa amaala obodo ị na -agabeghị na ịgaghị aga, mana nweta ohere na obodo 160 ndị ọzọ?
PR Newswire enweghị nsogbu ịbụ akụkụ nke atụmatụ ịkwalite ọrụ a n'ụwa.
Taa CS Global Partners kpọsara ọpụrụiche na mwepụta akwụkwọ akụkọ na PR NewsWire maka onye nta akụkọ ka ọ bulie ma bipụta akụkọ ụjọ na Lebanon wee resị ndị Lebanọn ịbụ nwa amaala ka ọ bụrụ St. Kitts na Nevis
CS Global Partners ọbụna nwere ọnụego pụrụ iche maka akwụkwọ ikike ngafe St. Kitts na Nevis taa wee dọọ aka na ntị na nke a bụ naanị obere oge.
Kitts na Nevis n'enweghi njem nlegharị anya chọrọ ego ahụ. United States na European Union ga -aga n'ihu na -anabata ụmụ amaala St. Kitts na Nevis na -enweghị visa. United States nwere nkwekọrịta pụrụ iche na St. Kitts maka atụmatụ iji nweta ikike ọrụ US na Green Card- niile maka ire ere.
Ịre ụmụ amaala bụ ihe na-ewu ewu na azụmaahịa n'ọtụtụ mba agụụ ji gburugburu ụwa. Mba ndị dị otu a na -enwekarị ezigbo aha n'ụwa, yabụ ụmụ amaala ọhụrụ na -enweta uru na ịnweta obodo ndị ha na -enweghị ike inweta visa ngwa ngwa. N'ihe banyere St. Kitts, nwa amaala nwere ike ịbanye karịa mba 160 na -enweghị visa.
Citizensmụ amaala dị otu a bụkwa azụ azụ maka ikike ọrụ na kaadị akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na United States.
Ndị otu CS Global taa gbara ezinụlọ Lebanon ume ka ha bụrụ ụmụ amaala nke St. Kitts na Nevis.
Nke a bụ ozi e kesara ndị Lebanon n'aha Gọọmentị St. Kitts na Nevis
Akụkọ ọhụrụ na-adọ aka na ntị banyere 'Ọpụpụ Mass nke Atọ' si na Lebanon, Karịsịa site na ndị Bi-National ka ọgba aghara na-agbasa ngwa ngwa.
Akwụkwọ akụkọ St.
Nkwupụta nke Crisis Observatory bipụtara na Mahadum America nke Beirut nke Lebanon kwubiri na mba ahụ na -abanye oke ọpụpụ nke oke ọpụpụ nke atọ. Dị ka akụkọ ahụ si kwuo, ihe ngosi dị n'ime banyere mbata Lebanon na ebili mmiri nke oke ọpụpụ bụ ohere dị elu nke ịkwaga n'etiti ndị ntorobịa Lebanọn. Dabere na nyocha emere n'afọ gara aga, pasent 77 nke ndị ntorobịa Lebanọn kwuru na ha na -eche maka ịkwaga na ịchọ ya, pasent a bụ nke kachasị elu n'etiti mba Arab niile.
Kemgbe ahụ Lebanon enweela ọtụtụ ọgbaghara, gụnyere agha, ogbugbu, na esemokwu ndọrọ ndọrọ n'ihi ọtụtụ iri afọ nke nrụrụ aka na ọchịchị ọjọọ. Paụnd Lebanọn agbadala ihe ruru pasenti 80, ebe ndị na -edebe ego enwekwaghị ohere ịchekwa ndụ ha. Ọtụtụ ndị ọkachamara, gụnyere ndị dọkịta, agụmakwụkwọ, ndị ọchụnta ego, na ndị na -ese ihe, ahapụla ma ọ bụ na -eme atụmatụ ịga. N'ọtụtụ ọnọdụ, ha na -esite na mba nke abụọ nne na nna ma ọ bụ nne na nna ochie nwetara bụ ndị hapụrụ Lebanon na ebili mmiri nke oge gara aga.
Ndị na-enwetabeghị nkwado nke ịbụ nwa amaala nna nna gara aga amalitela ụzọ na-abụghị nke omenala iji nweta nwa amaala. Micha Emmett, onye isi oche nke CS Global Partners, onye ndụmọdụ ndụmọdụ ụmụ amaala nke hiwere isi na London, kwuru na ọnụ ọgụgụ na -arịwanye elu nke ụmụ amaala Lebanọn na -ajụ ajụjụ banyere mmemme ịbụ nwa amaala site na itinye ego (CBI). CBI bụ usoro mbata na ọpụpụ nke onye ọchụnta ego ji etinye ụtụ ego akọwapụtara na akụnụba mba maka mgbanwe nwa amaala, na -ebute na paspọtụ obodo ahụ.
Emmett kwuru, "CBI na -abụkarị ebe kachasị mma na ngwa ngwa maka ndị na -eche ihu na -ejighị n'aka na obodo ha ma chọọ ụzọ ha ga -esi nweta akụ na ụba ha na ọdịnihu ezinụlọ ha." “Ọ bụ ihe nwute, ụwa anyị bi n'ime ya nwere ike bụrụ nke a na -atụghị anya ya, oge ọjọọ nwere ike ịdakwasị anyị n'oge ọ bụla. CBI na -enye ndị mmadụ ohere ịnwe atụmatụ ndabere maka oge ndị a. "
Ụfọdụ mmemme CBI kacha achọsi ike dị na Caribbean, ebe echiche bidoro. Enwere ike nweta nwa amaala sitere na St Kitts na Nevis 'Mmemme CBI na -enweghị nsogbu nke obibi ma ọ bụ njem achọrọ. Enwere ike ịme usoro a niile na ntanetị n'ime ọnwa ole na ole. Dabere na ndị ọkachamara na akwụkwọ akụkọ Financial Times 'PWM, mmemme a nọ ugbu a kacha mma n'ụwa.
Ụmụ amaala St. Ha nwekwara ike tinye ndị tụkwasịrị ha obi ma nyefee ụmụ amaala ha n'ọgbọ ọzọ.
Na mgbakwunye, ọ nweghị onye n'ime ụmụ amaala St. Nevis a nabatara ọhụrụ ga -agarịrị mba ọ bụla ha si na ya nweta paspọtụ.
N'okpuru onyinye a kpaara ókè, ezinụlọ ruru mmadụ anọ ga -etinyerịrị naanị USD150,000, na -aza mbelata USD45,000.
Onye isi oche Network Network Tourism Juergen Steinmetz kwuru, sị:
Ihere na St. Kitts na Nevis maka imepụta azụ a nke ụmụ amaala azụtara.
Mbata na ọpụpụ bụ okwu dị oke mkpa, a ga -enyerịrị ya ndị kwesiri ịmalite na mba ha tinyere akwụkwọ maka ịbụ nwa amaala.
Ịre ụmụ amaala abụghị naanị ihe ọjọọ, ọ na -emebi iguzosi ike n'ezi ụmụ amaala kpamkpam. Ọ bụkwa ihe nchekwa na nchekwa abụghị naanị maka obodo na -enye paspọtụ maka ọrịre kamakwa maka obodo ọ bụla na -enye ohere n'ihi paspọtụ a.